Soo dejisan Passport Photo 2.1.1 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPassport Photo
Bogga rasmiga ah: Passport Photo
Passport Photo – software ah in la abuuro sawiro size baasaboorka. Passport Photo awood u daabacayo sawiro iyo badbaadin faylasha qaabab kala duwan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u tayadoodii sawiro in heerarka dal oo kala duwan iyadoo la isticmaalayo profiles gundhig. Passport Photo kaloo ka mid ah shaqo ah in lagu daro qoraalka iyo goobaha faahfaahsan sawiro. Software waxay leedahay interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Abuuritaanka of a sawiro size baasaboorka
Tayadoodii sawiro in heerarka dal oo kala duwan
Daabacaadda ee photos
Interface sahlan oo si fudud
Soo dejisan Passport Photo
Faallo ku saabsan Passport Photo
Passport Photo Xirfadaha la xiriira
Software awood leh in lagula socdo 3D oo ka mid ah mashaariicda ee kakanaanta sare. Software waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in design CAD, graphic design iyo qorshaynta warshadaha.